ကချင်စစ်ပွဲ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရန် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြောပြီ | ဧရာဝတီ
ကချင်စစ်ပွဲ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရန် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြောပြီ
သာလွန်ဇောင်းထက်| January 16, 2013 | Hits:6,881
12 | | ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲများအတွင်း အရပ်သား သေဆုံးထိခိုက်မှုများ ရှိလာခြင်းကြောင့် စစ်ပွဲများ ရပ်တန့်ပြီး ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုဖြင့် အဖြေရှာကြရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်သည်။
ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဧရာဝတီသတင်းဌာနနှင့် ခေတ္တတွေ့ဆုံစဉ် အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “စစ်ပွဲဆိုရင် ဘာစစ်ပွဲမှ မကြိုက်ဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ဘာပဲပြောပြော ပြည်ထောင်စုသား အချင်းချင်း ဒီလိုတိုက်ရတဲ့အထိ မဖြစ်အောင်လို့ အချင်းချင်းကြားမှာ ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းမှု ရှိသင့်တယ်ဆိုတာ ခဏခဏ ပြောနေတဲ့ ကိစ္စပဲ။ ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းပြီး အဖြေရှာတဲ့ယဉ်ကျေးမှု ဖော်ထုတ်နိုင်မှ ဒါတွေကို ရှောင်လွှဲနိုင်မှာပါ။ အခု ကချင်စစ်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ တကမ္ဘာလုံးက စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ ဖြစ်နေကြပြီ” ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်လက်၍ “နောက်ဆုံးကျတော့ တိုင်းရင်းသားအရေးဆိုတာက အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရမယ်။ ယုံကြည်မှု စဖို့ဆိုတာ လေးစားမှုနဲ့ စရမယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် လေးစားမှ ယုံကြည်တဲ့အဆင့်ကို ရှိသွားမယ်။ အန်တီတို့အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို တကယ်ပဲ နားလည်ရဲ့လား၊ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကရော နားလည်ရဲ့လား၊ မျှော်မှန်းချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရဲ့လား၊ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိရဲ့လား၊ အဲဒါတွေက အများကြီး စကားပြောသွားတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဗြိတိသျှ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Alistair Burt က ဗြိတိပါလီမန်တွင် ကချင်စစ်ပွဲအရေးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဆိုင်းငံ့ထားသော စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းများကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရနိုင်ခြေ ရှိနေကြောင်း မကြာသေးမီရက်ပိုင်းက ပြောဆိုလိုက်မှုအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အံ့သြမှုမရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားသော နိုင်ငံများအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေသည် ၎င်းတို့ သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ညီ၊ မညီ လေ့လာဆန်းစစ် ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“ဖြစ်မှာပဲလေ။ သူတို့အနေနဲ့ အစကတည်းက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို လုံးဝ ဖယ်ရှားတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ရပ်ဆိုင်းထားတယ် ဆိုကတည်းက သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံချိန်စံညွန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီလား၊ မကိုက်ညီလား ကြည့်မှာပေါ့။ သူတို့ပြောတာက ဘာမှ အံ့သြစရာမရှိပါဘူး” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
လက်ရှိ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားများ၏ အရေးကိစ္စသည် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်သော ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ မီဒီယာများ၊ ပြည်သူများ အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးအနေဖြင့် တာဝန် အကန့်အသတ်များရှိနေပြီး ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်နေရကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှင်းပြသည်။
“ကချင်မှာဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော် အဆိုတင်သွင်းသွားတယ်။ အန်တီက တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကော်မတီက မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့် တာဝန်ရှောင်တာ၊ ခေါင်းရှောင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်စည်းဆိုတာ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကော်မတီ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ရှိတယ်။ တခြားကော်မတီတွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ ဘယ်လိုပြောရမလဲ၊ အများအသိအမှတ် ပြုထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ ၀င်ပြီးတော့ မလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ လုံးဝ မစွတ်ဖက်ရဘူး။ လိုအပ်လို့ရှိရင်တောင် ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် ကိုယ့်စည်းကိုယ် ထိန်းရမယ်။ အန်တီ့မှာလည်း တခြား ကော်မတီတာဝန်တွေ ရှိသေးတယ်။ တိုင်းရင်းသားအရေးက လူတိုင်းအရေးပါ။ လွှတ်တော်ထဲက လူတွေရဲ့ အရေးတင် မဟုတ်ဘူး။ မီဒီယာတွေရဲ့ အရေးလည်းဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ အရေးလည်းဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားအရေးကို ခေါင်းရှောင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း လုပ်တဲ့ကိုင်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်စည်းကိုယ် ထိန်းလုပ်ရတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်လက်ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အစိုးရအနေဖြင့် တာဝန်ပေးလျှင် KIA နှင့် အစိုးရအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလိုကြောင်း မကြာခဏ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
၁၈ လကြာ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော KIA နှင့် အစိုးရအကြား တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တသိန်းနီးပါး ရှိနေပြီး အရပ်သားများလည်း ထိခိုက်သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
နေပြည်တော်တွင် ကျောက်မျက်ဈေးနှင့် ကျောက်စိမ်း အချောထည် စက်ရုံများ ထူထောင်မည်
မြေသိမ်းမှုများ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းရန် သူရဦးရွှေမန်းပြော
လွှတ်တော် အမတ် ရုပ်သိမ်းခြင်း ဥပဒေ ဦးရွှေမန်းကို ဖြုတ်ချဖို့လား
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment mr TM January 16, 2013 - 7:31 pm	တိုင်းရင်းသားအရေးကလူတိုင်းအရေးပါလွှတ်တော်ထဲကလူတွေရဲ့အရေးတင်မဟုတ်ဘူးမီဒီယာ တွေရဲ့အရေးလည်းဖြစ်တယ်၊ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အရေးလဲဖြစ်တယ်တိုင်းရင်းသားအရေးကို ခေါင်းရှောင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ဒါပေမဲ့လည်းလုပ်တဲ့ကိုင်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်စည်းကိုယ်ထိန်းလုပ်ရ တယ်ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပါတယ်၊မှန်ပါတယ်သူပြောတာကိုလဲထောက်ခံပါ တယ်၊ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တာလဲရှိတယ်လွှတ်တော်ထဲကလူတွေလဲမလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအ နေရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတိုက်နေတာကတဘက်သတ်စစ် တပ်ကနေဝင်တိုက်နေတာပါ၊ကချင်ကခုခံတိုက်ပွဲအနေနဲ့ဘဲရှိနေတာ၊ကချင်ကိုအပြစ်အမျိုး မျိုးပြပြီးတိုက်ပွဲစခဲ့တာ၊ကချင်ကရထားလမ်းဗုံးခွဲတယ်၊စစ်တပ်ရဲ့ရိက္ခာပို့တပ်တွေကိုဝင်တိုက် တယ်၊တပ်သားစုဆောင်းဘို့အတွက်လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်နဲ့တော့အခုလို လေယျံနဲ့ဗုံးကြဲပြီးထိုးစစ်ဆင်စရာမဟုတ်ပါဘူးဒီနောက်မှာအကြောင်းတခုရှိနေပါသေးတယ် လို့သုံးသပ်မိပါတယ်တရုပ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုတခုခုအတွက်ကူညီမှုနဲ့ဝင် တိုက်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်၊တကယ်လို့အဲဒီလိုမဟုတ်ရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားနဲ့ပြည်သူလူ ထုရဲ့ဖိအားသုံးလိုက်ရင်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်အရစစ်ရပ်ဆဲရေးကိုမလုပ်လို့မရပါဘူး။ တချို့ကတော့သမတကြီးကစစ်ရပ်ဆဲစေခြင်တယ်၊တပ်မတော်ကတိုက်နေတာ တဲ့ဒါဆိုရင်တပ်မတော်ကဘာကိုလိုလားနေသလဲ?ရခိုင်အရေးအခင်းနဲ့ပြဿနာရှာပြီးနိုင်ငံမ တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့လို့အခုကချင်ကိုစခဲ့တာဘဲကချင်တိုက်ပွဲပြင်းထန် မှုကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့အဖွဲတွေပြန်ဆူပူလာမယ်၊ပြည်သူလူထုကဆန္ဒပြမှုတွေလုပ် လာမယ်၊ပါလီမန်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလည်တွေမကြေနပ်မှုတွေများလာမယ်၊နိုင်ငံတကာ ကပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လုပ်လာမယ်ဆိုရင်တပ်မတော်ကသူတို့ရဲ့နေရာကိုပြန်ရဖို့လွယ်ကူသွား မယ်လို့ထင်နေသလား?အဲဒါဆိုရင်ကချင်တိုက်ပွဲကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပြောနဲ့ဘယ်သူမှတားလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကယ်တော်မူပါ။
Reply	Tide January 17, 2013 - 10:48 am	Very much possibility. But, if it happens, they will put themselves inalake full of their own poops and urine.
Reply	Chinlay January 16, 2013 - 8:32 pm	Better late than Never.
Nobel Peace Prize winnier should not be tonguetied for peace.
Reply	Taunglay January 17, 2013 - 3:14 pm	R u jealous to her for noble peace prize?(because,u always complaining to her.hahaI know I know)Min doe ye khan sar chat ko nar lal dal?Don’t worry, Zozam’s is next winner.
Reply	Dove January 17, 2013 - 12:22 am	Suu Kyi is not only hlutdaw member more importantly she is opposition leader and chairwoman of the NLD party. When Hlutdaw’s Committee fails, Suu Kyi must stand up and pointing her finger at the wrongdoing on the junta. That’s the real job of opposition leader inademocratic society. The helpless people were watching when she was unfairly treated by the dictators and now watching her every step of movement. This time, the people see different Lady who took long nap while her children are dying because of the assault from her other children. Suu Kyi is the hope. Suu Kyi is the mother of peace. Suu Kyi is the solution of political dialogue. Thein Sein fails politically but our hope never fades away because Thein Sein never was our hope but Suu Kyi is. Therefore, she must not change her spots.
Reply	swe htwe January 17, 2013 - 12:35 am	We believe in you,Daw Su. We all are responsible to get peace. Only when there is peace,there will be democrazy and posperity.
Reply	Love January 17, 2013 - 10:40 am	I love DEMOCRAZY, Swe.
Reply	Mr Kian January 17, 2013 - 6:27 am	Why ASSK difficultly voices about Kachin War, i think so late…,now rouge burma army thought, ASSK support theirs Operation of Carpet Bombing in Kachin Land. She should speak early 2011 or 2012. Right now about bad and poor situation in Kachin Land, EU , UK ,UN and USA should must re-sanction to Burma.
Reply	လူဆိုး January 17, 2013 - 10:50 am	Are you Chinese from China? Or Military General from Myanmar?
Reply	Wooden Spoon January 17, 2013 - 7:09 am	There is nothing wrong with beingateacher. In this picture, Suu Kyi looks more likeateacher thanapolitician.
Reply	ဗမာ January 17, 2013 - 10:40 am	ဒေါ်စုပြောတာ အတော်လေးနောက်ကျသွားတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ ဒေါ်စုကိုအတော်လေးဝေဖန်ပြီးနေကြပါပြီ။ ကချင်ညီကိုများ နားလည်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာပဲ။ အင်းလေ.. သစ်ပင်ဆိုတာ ပိုမြင့်လေ ရာသီဥတုဒဏ် ပိုခံရလေပဲပေါ့။ ဒေါ်စုအပေါ်ထားခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မေတ္တာ မလျော့ပါးပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ အချိန်ကစကားပြောပါလ်ိမ့်မယ်။
Reply	moejoo January 17, 2013 - 11:08 am	တိုင်းရင်းသားအရေးကို ခေါင်းရှောင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း လုပ်တဲ့ကိုင်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်စည်းကိုယ် ထိန်းလုပ်ရတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်လက်ပြောသည်။i agree with this Mother Su……
Reply	မျက်ရေယိုဗုံး(မီးမလောင်ဗုံး) January 17, 2013 - 1:25 pm	ပြည်နယ်ပြည်မအားလုံးကိုစစ်တပ်ကပဲချုပ်ကိုင်ချင်တယ်လို့သာပြောင်ဖွင့်ပြောပါကွာ။လူတွေရောမြေပေါ်မြေအောက်ရေပေါ်ရေအောက်
KIA နှင့် တပ်မတော် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ပြင်းထန်
တပ်မတော်နှင့် KIA တိုက်ပွဲဆက်တိုက် ဖြစ်နေ
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဖားကန့် ဒေသသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာရန်ကိစ္စ ပျက်ပြယ်သွားဟုဆို
KIA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း အပိုင်း (၂)
KIA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း အပိုင်း (၁)
ဖားကန့် တိုက်ပွဲများ အတွင်း ဒေသခံ တထောင် ကျော် ပိတ်မိနေ
သမ္မတရဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ အပစ်ရပ်ရေးမှာ KIA ပါဝင်နိုင်ပါ့မလား